Soomaaliya Oo Hadal Gaf Ku Ah Qaynuunka Caalamiga Ah U Isticmaashay Somaliland Iyo Saamaynta Uu Ku Yeelan Karo | Haldoor News
Soomaaliya Oo Hadal Gaf Ku Ah Qaynuunka Caalamiga Ah U Isticmaashay Somaliland Iyo Saamaynta Uu Ku Yeelan Karo
In dawlada soomaaliya ay ergayga Gooni u gaasoodka ah(Separates Movements) ay u isticmaalaan somaliland marka loo eego qaynuunka caalamiga ah waxa ay leedahay macno gun ballaadhan, iyaguna waxay u adeegsanayaan sidii shaabad kale oo ay doonayaan inay ku istici-maalaan Somaliland.
Koox gooni-goosad ahi waxay ka dhigan tahay kuwo hubaysan, dhibaato wada, sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda aadamaha ku gafa dalna kala jaraya, Qaynuunka caalamiga ahi wuxuu mabnuucayaa in kooxi iyadoo xoog isticimaalaysa ay wadan kala gooyaan.
Taas badalkeeda dooda Jamhuuriyadda Somaliland waa mid sharciga Caalamiga ah waafaqsan waxaannay ku dhisan tahay in go’aankii 18 May 1991-kii ee Somaliland madax banaanideeda kula soo noqotay uu yahay go’aan aayo ka tashi ( Self Determination). Mabda’an oo dhigaya in Ummadi ay ka tashan karaan, go’aana ka gaadhi karaan aayahooda nololeed iyo masiirkooda siyaasiga ah, hadii ay la kulmaan duudsi iyo dhibaato gaar ah, qarankooduna (Mother state) uu noqdo mid aan danhooda ka turjumin, dawlad u gaar ahba dhisan karaan, arrintan waxa taageersan qaynuunka caalamiga ah iyo axdiga ay ku dhisan tahay Qaramada midoobay (United nation Charter).
Somaliland waxay qabtaa in Qarankii Somalia ee ay la midowday 1960-kii, uu duudsiyey xaqooqdii, dadkeediina uu xasuuqay, dhib badan ka dibna dadka Jamhuuriyadda Somaliland aayadooda ka tashadeen, oo dhisteen dawlad ay u madax banaan tihiin.
Labadan doodood ee Separates movement ama Secessionists iyo Self Determination sidaas ayey u kala duwan yihiin, mid waliba arrimo gaara ayaa ka dhasha.
Garyaqaan Sadaam Maxamed